Okuqukethwe: Ukhiye Wokubulala Ama-Blog Posts | Martech Zone
Okuqukethwe: Ukhiye Wokubulala Ama-Blog Posts
NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, i-2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, i-2014 Douglas Karr
Ukwabelana ngokuqukethwe okuhle kuzohlala kungamandla okushayela izinkampani ukwakha ubukhona bazo online, zabelane ngezindaba zazo, futhi zihehe, zibandakanye futhi zithengise kumakhasimende. Sisebenza namakhasimende amabili njengamanje amasu awo aseshintshile futhi abengabelani ngokuqukethwe okubukwayo ngokwenhlalo futhi asikaze sikhulise ividiyo noma i-infographics… kanye nokwehla kwesabelo sabo sezwi, izivakashi, futhi - ekugcineni - abaholayo futhi kuvaliwe ukuhlupheka. Okuqukethwe yi-oxygen edingekayo ukugcina ukumaketha kwakho okuku-inthanethi kuphila.
Ibhulogi yakho ingaba impahla enhle ekwakheni ubukhona bakho ku-inthanethi nempumelelo. Ngokusebenzisa indlela engaguquguquki, ukusungula nokugcina izwi lakho elihlukile, nokunikela ngokuqukethwe okuphezulu, okuwusizo kubafundi bakho, uzobe usendleleni eya ekuqinisekiseni ukuthi konke okuthunyelwe kubhulogi yakho kuyiposi lebhulogi elibulalayo.
Lokhu kuyi-infographic ephelele enokuningi ongabelana ngakho… qiniseka ukuthi uyayifunda bese usebenzisa izifundo kwiqhinga lakho lokubloga. Ukubuka konke okuhle kwezitayela, izithelo ezilengiswe kakhulu ezivame ukuphuthelwa, ukusungula ikhalenda lokuqukethwe nokukhiqiza okuqukethwe okufanele okuhambisa ukuqwashisa nokuthengisa.
Tags: iposi blogokuqukethwe okuthunyelwe kwebhulogiibhulogiisu lokubhulogaubiza isenzoikhalenda lokuqukethweisu lokubloga ezinkampaniokuthunyelwe kwebhulogi lokubulalaumhlahlandlela wesitayela
Ungayikhangisa Kanjani ku-Pinterest
Isithombe somthengi weselula
UJun 7, 2014 ngo-5: 20 AM
Izeluleko ezinhle ngokuqukethwe, izinsika ezine zibalulekile ekwakheni okuqukethwe kwekhwalithi okungakhuthaza ukuchofoza nokwabelana kumanethiwekhi omphakathi, okugcina kuholele ekuvezweni okukhulu kwi-intanethi. Siyabonga ngokwabelana ngale Douglas ye-inforgraphic, ilusizo kakhulu.
Jun 8, 2014 ku-10: 34 PM
Ukukhetha izihloko eziphoqayo kuyinto enkulu uDouglas. Reel abantu ku 😉 Ngiyabonga!